GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Motu Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Singapore Sign Language Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Samuel nke Mbụ 14:1-52
Ike Jonatan nọ na Mikmash kpaa (1-14)
Chineke mere ka ndị Izrel merie ndị iro ha (15-23)
Sọl ebughị ụzọ chee echiche tupu ya emee ka ndị Izrel ṅụọ iyi (24-46)
Ndị mmadụ nọ na-erikọta anụ na ọbara ya (32-34)
Ezinụlọ Sọl na agha Sọl lụrụ (47-52)
14 Otu ụbọchị, Jonatan+ nwa Sọl gwara onye na-ejere ya ozi, nke bu ngwá agha ya, sị: “Bịa ka anyị gafee ma gaa nso ebe ndị Filistia nọ na-eche nche n’akụkụ nke ọzọ.” Ma ọ gwaghị nna ya. 2 N’oge ahụ, Sọl nọ n’okpuru osisi pomigranet dị na Migrọn, ná ngwụcha ngwụcha Gibia.+ Ndị ya na ha nọ dị ihe dị ka narị ụmụ nwoke isii (600).+ 3 (Ahaịja yikwa efọd+ n’oge ahụ. Ọ bụ nwa Ahaịtọb,+ nwanne Ịkabọd,+ nwa Finihas,+ nwa Ịlaị,+ onye nchụàjà Jehova na Shaịlo.)+ Ma ndị Izrel amaghị na Jonatan apụọla. 4 E nwere nnukwu nkume ndị pịrị ọnụ dị n’ụzọ Jonatan chọrọ isi gafee gaa lụso ndị Filistia ahụ na-eche nche agha. Otu dị n’otu akụkụ, ọzọ adịrị n’akụkụ nke ọzọ. Aha otu bụ Bozez, aha nke ọzọ abụrụ Sine. 5 Otu nnukwu nkume ahụ dị n’ebe ugwu. Ọ dịkwa ka ogidi, chee ihu na Mikmash. Nke ọzọ dị n’ebe ndịda, ma chee ihu na Giba.+ 6 Jonatan wee gwa onye na-eburu ya ngwá agha, sị: “Bịa ka anyị gafee ma gaa nso ebe ndị ahụ a na-ebighị úgwù nọ na-eche nche.+ Jehova nwere ike inyere anyị aka, n’ihi na Jehova chọọ ka anyị merie, o nweghị ihe ga-egbochi ya ime ya, ma ànyị hiri nne ma anyị ehighị nne.”+ 7 Onye na-eburu ya ngwá agha asị ya: “Mee ihe ọ bụla obi gị gwara gị. Gaa ebe ọ bụla masịrị gị. Aga m eso gị aga ebe ọ bụla ị na-aga.” 8 Jonatan asị ya: “Anyị ga-agafe gaa nso ebe ụmụ nwoke ndị ahụ nọ, mee ka ha hụ anyị. 9 Ọ bụrụ na ha asị anyị, ‘Kwụrụnụ ebe ahụ ka anyị bịakwute unu,’ anyị ga-akwụrụ ebe anyị kwụ. Anyị agaghịkwa aga ebe ha nọ. 10 Ma ọ bụrụ na ha asị, ‘Bịanụ lụso anyị agha,’ anyị ga-aga, n’ihi na ọ bụ ihe na-egosi na Jehova ga-enyefe ha n’aka anyị.”+ 11 Ha abụọ wee mee ka ndị agha Filistia na-eche nche hụ ha. Ndị Filistia asị: “Lee ndị Hibru ka ha si n’ọgba ha zoro na-apụta.”+ 12 Ndị nche ahụ wee sị Jonatan na onye na-eburu ya ngwá agha: “Bịawanụ, ka anyị zi unu ihe ọkụ ji ntị òké eme.”+ Ozugbo ahụ, Jonatan sịrị onye na-eburu ya ngwá agha: “Sowe m, n’ihi na Jehova ga-enyefe ha n’aka ndị Izrel.”+ 13 Jonatan wee huru ehuru jiri aka ya na ụkwụ ya na-agbago, onye na-eburu ya ngwá agha sokwa ya n’azụ. Jonatan ebido gbuwe ndị Filistia, onye na-eburu ya ngwá agha anọrọkwa n’azụ ya na-egbu ha. 14 Ndị mbụ Jonatan na onye na-eburu ya ngwá agha gburu gburugburu ebe ahụ ha nọ* dị ihe dị ka ụmụ nwoke iri abụọ. 15 Ezigbo ụjọ jidekwara ndị Filistia niile nọ ebe ha mara ụlọikwuu n’ọhịa, ha na ndị niile na-eche nche nakwa ndị agha ndị na-akwakọrọ ihe ndị ọzọ.+ Ala malitekwara ịma jijiji. Ihe a niile si n’aka Chineke. 16 Ndị nche Sọl, ndị nọ na Gibia+ nke dị n’ebo Benjamin, hụkwara na ebe niile ndị iro ha mara ụlọikwuu na-agba ghara ghara.+ 17 Sọl wee sị ndị agha ya na ha so: “Biko, gụọnụ mmadụ niile ọnụ ma mara onye n’ime anyị na-anọghị ebe a.” Mgbe ha gụrụ ndị mmadụ ọnụ, ha chọpụtara na Jonatan na onye na-eburu ya ngwá agha anọghị ebe ahụ. 18 Sọl gwaziri Ahaịja,+ sị: “Bute Igbe ezi Chineke ebe a.” (N’ihi na ndị Izrel bu Igbe ezi Chineke n’oge ahụ.*) 19 Ka Sọl nọ na-agwa onye nchụàjà ahụ okwu, ebe ahụ ndị Filistia mara ụlọikwuu nọ na-agbakwu ghara ghara. Sọl asịzie onye nchụàjà ahụ: “Hapụwa.” 20 Sọl na ndị niile ya na ha so wee gbakọọ ma gawa n’ọgbọ agha. Mgbe ha rutere, ha hụrụ na ndị Filistia ji mma agha ha na-egburịta ibe ha. Ebe ahụ niile nọkwa na-agba nnọọ ghara ghara. 21 Ndị Hibru, ndị dụnyeere ndị Filistia úkwù na mbụ, ndị sokwa ha gaa ebe ha mara ụlọikwuu, nọkwa na-agakwuru ndị Izrel so Sọl na Jonatan. 22 Mgbe ndị Izrel niile, ndị zoro+ n’ala Ifrem bụ́ ugwu ugwu, nụrụ na ndị Filistia agbaala ọsọ, ha sooro ndị ibe ha chụwa ha. 23 Jehova wee zọpụta ndị Izrel n’ụbọchị ahụ.+ Ha lụkwaara agha ahụ ruo Bet-even.+ 24 Ma, ike mechara gwụ ndị Izrel n’ụbọchị ahụ, n’ihi na Sọl mere ka ha ṅụọ iyi, sị: “O nweghị onye ga-eri ihe* ruo anyasị, ruokwa mgbe m ga-egbucha ndị iro m. Onye ọ bụla riri ihe, a ga-abụ ya ọnụ.” Ọ bụ ya mere na o nweghị onye n’ime ha riri ihe ọ bụla.+ 25 Ndị agha ahụ niile wee gawa n’ọhịa. Mmanụ aṅụ dịkwa n’ala ebe ahụ. 26 Mgbe ha banyere n’ọhịa ahụ, ha hụrụ na mmanụ aṅụ nọ na-atasị, ma o nweghị onye n’ime ha detụrụ ya ọnụ, n’ihi na ụjọ nọ na-atụ ha maka iyi ahụ ha ṅụrụ. 27 Ma Jonatan anụghị na nna ya mere ka ndị agha ahụ ṅụọ iyi.+ Ọ matịrị aka rụnye ọnụ mkpara o ji n’aka na mmanụ aṅụ ahụ, rachaa ya. Mgbe ọ rachara ya, o nwetara ume.* 28 Otu n’ime ndị agha ahụ sịrị ya: “Nna gị mere ka ndị Izrel ṅụọ iyi, sị, ‘Onye ọ bụla riri ihe taa, a ga-abụ ya ọnụ.’+ Ọ bụ ya mere ike ji gwụchaa ndị mmadụ.” 29 Ma, Jonatan sịrị ya: “Nna m akpatarala ndị mmadụ ezigbo nsogbu. Ị̀ makwa na enwetara m ume ná ntakịrị mmanụ aṅụ a m metụrụ ọnụ? 30 Marazie ihe gaara eme ma a sị na e nweghị ihe gbochiri ndị agha anyị iri ihe+ ha kwatara n’aka ndị iro ha taa. Anyị gaara egbu ndị Filistia karịa otú anyị gburu ha.” 31 N’ụbọchị ahụ, ha si na Mikmash gburu ndị Filistia ruo Aịjalọn.+ Ezigbo ike gwụkwara ha. 32 Ma, anyaukwu mere ka ha jiri ọsọ na-ebukọrọ ihe ha kwatara n’agha. Ha kpụụrụ atụrụ na ehi na ụmụ ehi, gbuo ha n’ala nkịtị, rikọtakwa ha na ọbara ha.+ 33 A gakwara kọọrọ Sọl, sị: “Ndị Izrel emehiela Jehova. Ha na-erikọta anụ na ọbara ya.”+ Sọl wee sị: “Unu akpaala àgwà ka ndị na-enweghị okwukwe. Kwataranụ m otu nnukwu nkume ozugbo.” 34 Ọ sịkwara: “Gaanụ ebe niile ndị Izrel nọ, sịkwanụ ha, ‘Ọ bụ n’elu nkume a ka onye ọ bụla n’ime unu ga na-egbu ehi ya na atụrụ ya tupu unu erie ha. Unu emehiezila Jehova, na-erikọta anụ na ọbara ya.”+ N’ihi ya, onye ọ bụla n’ime ndị agha Izrel kpụtara ehi ya n’abalị ahụ gbuo ya n’elu nkume ahụ. 35 Sọl wee rụọrọ Jehova ebe ịchụàjà.+ Ọ bụ ya bụ ebe ịchụàjà mbụ ọ rụụrụ Jehova. 36 Sọl mechara sị: “Ka anyị chụwa ndị Filistia n’abalị ma na-ebukọrọ ihe ha ruo ụtụtụ. Anyị agaghị ahapụ onye ọ bụla n’ime ha ndụ.” Ha asị: “Mee ihe ọ bụla dị gị mma.” Onye nchụàjà asị: “Ka anyị jụọ ezi Chineke ase ebe a.”+ 37 Sọl wee jụọ Chineke ase, sị: “Ọ̀ bụ m gaa chụwa ndị Filistia?+ Ị̀ ga-enyefe ha n’aka ndị Izrel?” Ma Chineke azaghị ya n’ụbọchị ahụ. 38 Sọl wee sị: “Bịanụ nso ebe a, unu ndị isi Izrel, chọpụtanụ ihe anyị mehiere taa. 39 Eji m Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, onye napụtara ndị Izrel, na-aṅụ iyi, na ọ bụrụgodị na ọ bụ Jonatan nwa m mehiere, ọ ga-anwụrịrị.” Ma ha niile gbara nkịtị. 40 Ya agwazie ndị Izrel niile, sị: “Nọrọnụ n’otu akụkụ, ka mụ na Jonatan nwa m nọrọ n’akụkụ nke ọzọ.” Ha asị Sọl: “Mee ihe dị gị mma.” 41 Sọl asị Jehova: “Chineke Izrel, biko, jiri Tọmịm+ gwa anyị onye ọ bụ.” A họọrọ Jonatan na Sọl, ya abụrụ na aka ndị Izrel ndị ọzọ dị ọcha. 42 Sọl wee sị: “Feenụ nza+ iji mara ma ọ̀ bụ m ka ọ̀ bụ Jonatan nwa m.” Nza mara Jonatan. 43 Sọl asị Jonatan: “Gwa m ihe i mere.” Jonatan asị ya: “Naanị ihe m mere bụ ịracha ntakịrị mmanụ aṅụ dị n’ọnụ mkpara m ji n’aka.+ Lekwa m, adị m njikere ịnwụ.” 44 Sọl wee sị: “Ka Chineke taa m ahụhụ, ka ọ tasiekwa m ahụhụ ike ma ọ bụrụ na gịnwa bụ́ Jonatan anwụghị.”+ 45 Ma ndị Izrel sịrị Sọl: “Gịnị mere Jonatan ga-eji anwụ, ebe o mere ka ndị Izrel merie ezigbo mmeri?*+ Nke a agaghị eme! Anyị ji Jehova, bụ́ Chineke dị ndụ, na-aṅụ iyi na ọbụnadị otu ntutu isi ya agaghị esi n’isi ya dapụ, n’ihi na Chineke nyeere ya aka ya akpaa ike ọ kpara taa.”+ Otú a ka ndị Izrel si napụta Jonatan. Ọ nwụghịzi. 46 Sọl wee kwụsị ịchụ ndị Filistia, ndị Filistia alaa n’obodo ha. 47 Sọl wee mee ka alaeze ya sie ike n’Izrel. Ọ na-aga alụso ndị iro ya niile agha n’ebe niile, ma ndị Moab+ ma ndị Amọn+ ma ndị Ịdọm+ ma ndị eze Zoba+ ma ndị Filistia.+ Ebe ọ bụla ọ gara, ya emerie ha. 48 Ọ bụ dike n’agha. O meriri ndị Amalek,+ napụtakwa ndị Izrel n’aka ndị na-akwakọrọ ihe ha. 49 Aha ụmụ Sọl ndị nwoke bụ Jonatan, Ishvaị, na Malkaị-shua.+ Ụmụ ya ndị nwaanyị dị abụọ. Aha nke ada bụ Mirab.+ Aha nke ọ tọrọ bụ Maịkal.+ 50 Aha nwunye Sọl bụ Ahinoam, nwa Ahimaz. Aha onyeisi ndị agha ya bụ Abna,+ nwa Nee, nwanne nna Sọl. 51 Kish+ bụ nna Sọl. Ma, Nee+ nna Abna bụ nwa Abayel. 52 Sọl na ndị Filistia nọ na-alụ agha kpụ ọkụ n’ọnụ n’oge niile ọ chịrị.+ Ọ na-abụ Sọl hụ nwoke ọ bụla siri ike ma ọ bụ nwoke ọ bụla obi kara, ya akpọrọ ya ka o soro ná ndị agha ya.+
^ Ma ọ bụ “gburu n’ọkara ala ebe ehi abụọ nwere ike ịkọ ihe n’ụbọchị.”
^ Na Hibru, “n’ụbọchị ahụ.”
^ Na Hibru, “anya ya nwuru gbaa.”
^ Ma ọ bụ “ebe ọ zọpụtara ndị Izrel?”